Vaovao - Ny fiheverana amin'ny fanoratana puce aorian'ny AVR microcontroller IC decryption
Ny fiheverana amin'ny fanoratana puce aorian'ny AVR microcontroller IC decryption
Vokatry ny fampiasana fitaovana isan-karazany dia tsy mitovy ihany koa ny fomba fandaharana decryption IC sy ny takiana amin'ireo antontan-taratasy.
Ny fomba iray dia ny fampiasana fomba programmer iraisana, raha ny fampiasana programmer ankapobeny dia manohana ny fisie BIN na HEX amin'ny ankapobeny, entao mivantana ilay rakitra, ary avy eo ny fanaingoana mifanaraka aminy, azonao atao ny mandoro mivantana.
Faharoa, fomba iray hafa ny fampiasana fomba fampidinana ISP na JTAG hanoratanao ny rakitra, satria misy karazany maro ny tsipika fampidinana, ny tsipika fampidinana ankapobeny dia tohanana amin'ny fisintomana AVRSTUDIO, fampidinana STUDIO, ny fisie takiana ilaina dia tsy maintsy misy fisie format HEX , raha ampidirina ny fisie BIN, dia hoentina fa tsy ny endrika fanohanana AVRSTUDIO. Ary mitaky fisie FLASH sy EEPROM alaina misaraka, izany hoe aorian'ny famoahana famoahana rakitra mba hanomezana fisie FLASH sy EEPOM roa.
Ny decryption IC microcontrollers IC dia manana andian-tsarimihetsika marobe mifandraika amin'ny fikirakirana ny fitaovana sy ny tontolon'ny asa. Tena ilaina ireo fuse ireo. Ny mpampiasa dia afaka mametraka sy manamboatra ny Fuse mba hahatonga ny microcontroller AVR tsy mitovy amin'ny natiora mifanaraka amin'ny fampiharana azo ampiharina. Saingy noho ny filàna manamboatra ny fuse, amin'ireo vao manomboka tsy dia mahatakatra loatra ny toerana, aorian'ny famoahana ny microcontroller, ny programa amin'ny fotoana fandoroana, fa koa amin'ny fanamafisana ny fuse, raha diso ny fikirana dia mety tsy fiovana Asa na fiasana. Ireo rehetra amin'ny fandoroana ireo antontan-taratasy voarindra rehefa tsy maintsy ampiarahina ny fuse, satria ny fitaovana hanohanana ny AVR dia tena betsaka, ary ny fitaovana samihafa amin'ny rindrambaiko samihafa dia samy hafa, koa ataovy izay tsara indrindra amin'ny famoahana microcontroller AVR alohan'ny hamaritana ny orinasa inona no fitaovana no ampiasaina, ka ny orinasan-tserasera decryption mifanaraka amin'ny fitaovan'izy ireo manokana hanaovana ny sari-tany interface, ka mora mamoaka aorian'ny programa handoroana, fa azon'izy ireo atao koa ny mampiasa ny orinasa decryption mba hanomezana santionany hamakiana ny fanamafisam-peo. Ny fitaovana dia afaka mamaky mivantana ny puce, ny sasany mamaky ny fikirakira sns, ary avy eo mamaky ilay fananganana voatahiry.
Raha ny orinasa tokana-chip fotsiny, ny toerana misy anao dia ny fampiasana ny oscillation 1MHZ RC ao anaty ho toy ny famantaranandro, ary ny seranan-tsambo JTAG dia ao anatin'ny maody azo avela. Ho an'ny AVR fuse farafaharatsiny mba hamafana ireto teboka manaraka ireto.
1, AVR fuse dia azo alamina imbetsaka fa tsy solo'ny OTP indray mandeha.
2, AVR chip encryption lock (LB2 / LB1 = 1 / 0,0 / 0) dia tsy afaka mamaky ilay puce amin'ny alàlan'ny angon-drakitra FLASH sy EEPROM, fa ny satan'ny fiusse dia azo vakiana ihany, fa tsy afaka manova ny Configuration.
3, ny fuse bit fuse dia azo tanterahina amin'ny maody serial, ISP ary JTAG serial.
4, ampidino ny dingana marina dia: ao amin'ny puce raha tsy manidy ny puce handefasana ny kaody sy data mandeha, ampifanaraho ny fehezan-dalàna mifangaro, ary farany amboary ny toerana fampidirana chip.
5, ny baiko hamafana ny puce dia hamafa ny angona FLASH sy EEPROM, ary miaraka amin'izay koa ny status bit bit roa-bitika dia voalamina tsy misy fanjakana hidin-trano (LB2 / LB1 = 1/1), fa ny baiko mamafa kosa dia tsy miova ny fanjakana Bit fuse hafa.
6, ary ny tena zava-dehibe dia ny bitika BOOTRST, ity sombin-javatra ity dia nametraka ny fifandraisana misy eo anelanelan'ny chip aorian'ny programa Power-on avy amin'ny 0X0000 na avy amin'ny faritra BOOT nanomboka nampihatra. Ny safidin'ny loharano famantaranandro dia tena zava-dehibe ihany koa, aorian'ny fandikana ny programa raha matetika tsy mora ampiasaina ny mpanjifa, ny filalaovana ny ampahan'ny famantaranandro dia tsy napetraka noho ny antony, noho izany ny famantaranandro dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fanovana tany am-boalohany.
7, mila mazava tsara fa ny SPIEN bit, be dia be ny mpanjifa efa nifampiraharaha tamin'ny telefaona, izany hoe manome ny microcontroller tsy afaka mifandray amin'ny ISP izahay, ary afaka mividy ny azy ireo, ny fuse ho an'ny SPIEN dia voalamina ISP , raha SPIEN dia 1, ISP dia avela fanjakana, raha 0 ny mandrara ny fanjakana, raha voarara fanjakana mazava ho azy, tsy afaka ISP seranan-tsambo.
8, ny puce dia voahidy ary mihidy, raha hita ny fuse ary tsy mety ny fanamafisam-peo dia tsy maintsy ampiasao ny baiko hamafana ny chip mba hamafana ny angon-drakitra ao anaty puce, hamafana ny hidin'ny encryption, ary avy eo hampidina indray ny kaody sy ny data mandeha, manova ny fuse mifandraika amin'ny configurement, Ary farany avereno amboarina ihany ny valin'ny hidin'ny chip.